Dustless ပေါက်ကွဲမှုစက် - တရုတ် Qingdao Antai အကြီးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ
အဆိုပါ dustless ပေါက်ကွဲမှုစက်ထိုကဲ့သို့သော Automation, အဏ္ဏဝါ, Reginery, ရေယာဉ်စုမော်တော်ယာဉ်များ, ရာဖီတီပန်းချီဖယ်ရှားရေး, အစင်းဖယ်ရှားရေး, အကြီးစားစက်ကိရိယာများ, Surface ကသန့်ရှင်းရေး, Powder အပေါ်ယံပိုင်း, ကမ်းလွန်, Wood ကပွနျလညျထူထောငျ, ကျောက်ဂွမ်း Abaement သကဲ့သို့, ကမ္ဘာပေါ်မှာတင်သွင်းတိုင်းအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ dustless ပေါက်ကွဲမှုစက်တွေအဓိကအား nozzle, စိုစွတ်သောပေါက်ကွဲမှုပူးတွဲပြည်တွင်းရေးပိုက်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေ, မြေမှုန့်ကိုအခမဲ့ပေါက်ကွဲမှုအကြီးအကဲများ, ပွန်းစားထိန်းချုပ်မှုကိရိယာ၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစည်းနေကြသည်။
Dustless ပေါက်ကွဲမှုစက်မှုလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အသိအမှတ်ပြုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွေဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုလိုအပ်ပါတယ်သမျှသော features တွေကိုဆက်ကပ်။ အားလုံးစက်တွေသိသိသာသာပွန်းစားခြင်း, စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ဘေးကင်းထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချထားတဲ့ရေတွင်းတစ်တွင်းဒီဇိုင်းနှင့်သက်သေပြတစ်ခုတည်းအပိုင်းအစဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုလူသေ switch သည်နှင့်တိတ်ဆိတ်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါစက်များအများဆုံး 150 PSI အလုပ်လုပ်ဖိအားများအတွက်ဆောက်လုပ်နေကြသည်။ အဆိုပါ pneumatic ပွန်းစားခြင်းအဝေးထိန်းအဆို့ရှင်ကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ်စတင်ရန်အော်ပရေတာအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
(1) ။ ပေါက်ကွဲမှုအကြံပေးအဖွဲ့
blasting mode ကို
~ 60 မိနစ်
~ 90 မိနစ်
~ 2-3 နာရီ
~ 4-6 နာရီ
အရွယ်အစား (H ကို / W / D)
48 "H ကို * 20" W * 22 ": D
55 "H ကို * 27" W * 34 ": D
54 "H ကို * 34" W * 40 ": D
63 "H ကို * 34" W * 40 ": D
76 "H ကို * 48" W * 46 ": D
98 "H ကို * 48" W * 46 ": D
(2) ။ လေထုတွန်းများအတွက်လိုအပ်ချက်
4-10 ဘား, 60-3755 CFM, 30-150 PSI, 0.2-1.0 MPA
(3) ။ ပါဝင်ပါသည်
A. အပေါက်ကွဲမှုရေပိုက် (အတွင်းပိုင်းအချင်း 32mm ဖြစ်ပါတယ်)
ခ Deadman Active ဆို့ရှင်
C. Tungsten carbide nozzle (အချင်း 10 မီလီမီတာဖြစ်ပါတယ်)
(4) ။ Consumer
6.Safe မရှိ Sparks
အနီးအနားမှာအလုပ်အကိုင်များကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သော 8.Not ။
12. တစ်ဦး primer-အဆင်သင့်မျက်နှာပြင်အရွက်
13. လွယ်ကူ clean up လုပ်ဖို့
14. 72 နာရီသံချေးတားဆီးပေးပါသည်
အဆိုပါ Dustless ပေါက်ကွဲမှုစက်ပန်းချီဖြစ်စဉ်ကို
မျက်နှာပြင်ထိရောက်မှုသန့်ရှင်းရေးအဆိုပါ Dustless ပေါက်ကွဲမှုစက်
အဆိုပါ Dustless blasting ပေးပို့မှုလုပ်ငန်းစဉ်
အဆိုပါ dustless ပေါက်ကွဲမှုစက်အသေးစိတျဓာတျပုံ - DB150 & DB225 & DB500 & DB800
သြစတြေးလျဖောက်သည် dustless blaster check လုပ်ထားကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှု
နောက်တစ်ခု: Wet type dustless water and glass bead blasting Machine
ပွန်းစားခြင်းပေါက်ကွဲမှု ROOM တွင်
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Dustless ပေါက်ကွဲမှု
blasting Pot စက်
စက် blasting စက်မှု Shot Casting
တရုတ် Dustless ပေါက်ကွဲမှုပစ္စည်း
Db225 Dustless ပေါက်ကွဲမှု
Db500 Dustless ပေါက်ကွဲမှု
ဖုန်မှုန့်-အခမဲ့ Sandblasting စက်
Dustless ပေါက်ကွဲမှု DB 150
Dustless ပေါက်ကွဲမှု DB 225
Dustless ပေါက်ကွဲမှု DB 500
Dustless ပေါက်ကွဲမှု Db150
Dustless ပေါက်ကွဲမှု Db225
Dustless ပေါက်ကွဲမှု Db500
Dustless ပေါက်ကွဲမှု Db800
ရောင်းရန် Dustless ပေါက်ကွဲမှုပစ္စည်းကိရိယာ
ရောင်းရန် Dustless ပေါက်ကွဲမှုစက်
grit ပေါက်ကွဲမှု ROOM တွင်
High Quality ပေါက်ကွဲမှုပစ္စည်း
အတွင်းစိတ်က Wall ပေါက်ကွဲမှုစက်
Rotary Indexing အမျိုးအစားပေါက်ကွဲမှုစက်
သံမဏိ grit ပေါက်ကွဲမှုပစ္စည်း